ọnwa: January 2019
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ejegharị ejegharị na Europe na a mmefu ego bụ ihe ịma aka! Otú ọ dị, ọ bụ omume dị ka ogologo dị ka ị na-eme gị nnyocha iji ndokwa gị na njem na-eji amamihe. Ọ pụrụ iju gị anya otú i nwere ike ịzọpụta site na-ewere nri mode nke njem ma ọ bụ ị na-ahọrọ dị ọnụ ala karịa ebe. Trust…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Onye ọ bụla na-emeso-ejegharị ejegharị dị iche iche. Ụfọdụ na-enwe na-abịa site na-eme njem mgbe na nsọtụ ọzọ ụfọdụ dị nnọọ njem ruru ka nrụgide ndị ọgbọ ma ọ bụ ezinụlọ mgbali. Ihe ọ bụla kpatara ya mgbe ọ na-abịa na-eme njem, again there are different ways of how people like to plan…